Ny endri-javatra ny ny Breziliana ny olona
Brezila angamba no tena mampiady hevitra ny firenena tao Amerika latina. Ny fahantrana matetika coexists amin’ny nanelatrelatra harena sy ny hatsaran-tarehy ny ataon’ny mpifehy faharavana. Ankoatra izany, i Brezila no iray amin’ireo tsara indrindra amin’ireo firenena ao amin’ny tontolo izao. Izany no nalaza noho ny malaza carnivals, izao tontolo izao ny lava indrindra tora-pasika. Izany dia firenena iray fialan-tsasatra, firenena carte postale. Hanambady ny olom-pirenena ao Brezila no mora indrindra indrindra fomba mampihetsi-po amin’ity firenena ity. Na izany aza, dia zava-dehibe ny hahafantatra izay ny mpiara-miasa, izay sosona ny fiaraha-monina tokony hisy, ny toerana izay onenany sy ny fomba ny fahaizana ara-bola dia mamela antsika mba hanome Anao ny fiainana ara-dalàna. Breziliana ny lehilahy dia mety hampahasosotra sy namana, — dresaka amin’ny olona dimy minitra ianao efa namana tsara indrindra, amin’ny hariva tonga dia miara-misotro labiera, ny zoma dihy, ary tamin’ny asabotsy ianao efa any amin’ny asabotsy fianakaviana mitono hena. Izy ireo no tia ny antoko. Miscellaneous: baolina-fantasy momba ny fankalazana ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany ao amin’ny fikambanana, amin’ny andro firavoravoana amin’ny fanokafana ny vanim-potoana (fifidianana, solifara, ranger fandokoana fialam-boly, fetibe, fako, fanjonoana eo amin’ny olona, ny fahavaratra, ny ririnina, ny orana, ny hain-tany), ny labiera fetibe isaky ny zoma, ny hividy fiara vaovao, vaovao ny ankizivavy, tombokavatsa, piercings, surf zana-kazo, farany na ny fanombohan’ny tetikasa vaovao any am-piasana, nisokatra ny taloha tovovavy, ny fitomboana na ny fihenan’ny vidim-piainana. Fialan-tsasatra satria nandritra ny fotoana ela (ny roa herinandro) tsy nisy ny fety. Amin’ny Ankapobeny, misy foana ny antony ny faniriana rehetra ihany koa eo foana. Noho izany ny fiainana mitohy ny fankalazana. Breziliana ny olona potoana, potoana any Brezila amin’ny ankapobeny dia tsy natao ho sarobidy. Maro samy hafa guff ary manao fampanantenana. Ireo izay fampanantenana sy manatanteraka — vondrona.
Ny zavatra mahazatra any Brezila dia mifangaro ny fanambadiana. Izany dia vokatry ny fiainana ao amin’ny firenena samy hafa ny Firenena. Tena mahazatra sy ny fanambadiana ny Slav ny Breziliana. Rehefa mamorona ny fianakaviana iray amin’ireo Breziliana, sampa tsy ampy amin’ny vehivavy ianao dia mila mahafantatra ny sasany mampihavaka ity vahoaka ity. Na dia eo aza ny zava-misy fa isan-Breziliana dia tsy maintsy misy ny tsy miankina ny fiara, dia ara-dalàna heverina ny zava-misy fa ny vady ny tenany no nandeha an-trano miaraka amin’ny kitapo mavesatra ny sakafo. Ny endri-javatra mahaliana ny Breziliana ny fianakaviana dia ny fizaràna tsara ny andraikiny. Noho izany, tsy misy afa-tsy vehivavy ny Raharaha ny: ny ao an-tokantrano, ny fanomezana ny fianakaviana amin’ny sakafo, fanadiovana ny trano, ny fikarakarana ny ankizy. Ary ny olona tsy dia ho raisina ho fampiharana. Fa ny fanamboarana sy fikojakojana ny trano izany dia ny fiahiana ny olona. Be dia be koa ny saina Breziliana ny fianakaviana ny vola mba hihazonana ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy. Malaza gyms, dihy kilasy sy kokoa, mamela samy vehivavy sy ny lehilahy mba hihazonana ny endrika sy hanatsara ny fahasalamana. Ireo Breziliana ny olona rehetra tena tsara tarehy, tsy haka lamba famaohana izy ireo dia abset amin’ny masoandro. Masoandro elo be loatra alokaloka dia hanome surfboard. Teo amoron-dranomasina izy ireo tsy tan, tena tan, manao fanatanjahan-tena. Maizina hoditra dia antony iray mahatonga ny fireharehana, ny famantarana ny toetra sy Afro-Indian fakany.
Ny vatanao dia ho tonga lafatra ny rehetra miditra, ary nihazakazaka manodidina, an-karihary. Breziliana ny fianakaviana, ny saina ihany koa ny karama ho an’ny ankizy. Ary matetika dia afaka ho hita ny fianakaviana izay mihoatra noho ny zanany roa. Na izany aza, dia tsy nanaiky ny Breziliana ny fianakaviana mba hampianarana ny ankizy. Izy ireo dia navela hanana tsy miankina, mba hahazo traikefa. Na izany aza, ny fianakaviana tsirairay dia miezaka ny hanome ny ankizy ny fampianarana ambony, izay no fanalahidin’ny hoavy mamirapiratra. Breziliana ny olona no manahy be loatra amin’ny baolina kitra. Ho an’ny sasany eo amin’ny ambaratongam-pahefana ny firaiketam-po eo amin’ny toerana voalohany ekipa mpanao baolina kitra, dia Andriamanitra, dia avy eo fianakaviana.
Ity karazana tafahoatra
Ho an’ny maro, ny fialam-boly no milalao baolina fandàka ao an-toerana ny tarika mpilalao baolina kitra. Ny ankamaroan’ny Breziliana ho tsara, dia tompon’andraikitra ny ray, ny fikarakarana sy hihaino, afa-tsy manam-paharoa ny fisotroana ao ny telo-polo taona. Mialoha izany, afa-tsy kely ohatry ny Breziliana dia mety ho mifandray amin’ny foto-kevitra tsara i dada. Fa rehefa — ny zava-misy. Iray Ankapobeny toro-hevitra ho an’ny olona rehetra te-hanana fifandraisana amin’ny lehilahy Breziliana. Manana ny hatsarany mafana amerika latina sy ny Breziliana ny ra any amin’ny tany mafana. Fa izany dia tsara kokoa ny mifidy ireo izay efa nandao ny ray aman-dreny an-trano ary nanao zavatra ny tenany. Ireo izay raha ny marina dia hanao zavatra ho Anao
← Ara-kolontsaina fialan-tsasatra amin'ny tovovavy Breziliana faritra iva
Ny Fitsangantsanganana Tany Brasilia. Ny fiarahana amin'ny tranonkala Brasilia ho maimaim-poana, tsy misy fisoratana anarana, ho an'ny fifandraisana matotra →